Kombiyuutarada oo xumaada waxay halis ku yihiin ammaanka bukaanka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Kombiyuutarada oo xumaada waxay halis ku yihiin ammaanka bukaanka
La daabacay onsdag 7 augusti 2013 kl 15.21
Habka kombiyuutarada laga isticmaalo goobaha daryeelka caafimaadka oo aysan shaqadoodu hagaagsanayn waxaa ku baxa kharash badan oo gaaraya balaayiin karoon. Waxaa digniintaan soo gudbiyey shaqaalaha goobaha caafimaadka iyo ururkooda shaqaalaha. Waxaa digniintaan lagu sheegay in meeshii laga daryeeli lahaa dadka bukaanka ah, waqtiga intiisa badan lagu lumiyo gelidda iyo ka bixidda kombiyuutarada goobahaas yaal.
Dad ka socda ururka dhakhaatiirku waxay qabaan in cilladaha ku yimaada kombiyuutaradu ay halis ku yihiin ammaanka dadka bukaanka ah. Karin Båtelson oo guddoomiye u ah ururka dhakhaatiirku waxay arrintaan ka tiri:
- Mar walba oo la doonayo in la eego oo la akhriyo sawirada raajooyinka, waxaa khasab noqota marka hore la damiyo ama xiro dhawr borogaraam. Marka la doonayo in yeeris la duubana waa in marka hore iftiinka kombiyuutarka hoos loo dhigaa. Haddii warbixino qaldan laga helo qofka bukaanka ah, waxaa nala soo gudboonaan kara xaalado halis ah.
Xaaladaha meelo badan oo ka mid ah xarumaha daryeelka caafimaadka sidaas ayey u muuqdaan. Ururka shaqaalaha caafimaadka waxaa marar badan soo gaara teleefano ay soo direen dad ka cabanaya in dhibaatooyin la soo gudboonaadaan shaqadooda mar walba oo ay shaqaaluhu ku mashquulaan hawlaha maamulka meeshii ay ka daryeeli lahaayeen dadka bukaanka.
- Intaas waxaa sii dheer kharashka ku baxa. Waxaa waqti aad u weyn qaata wax ka qabadka barnaamijyada kombiyuutarada. Waxaana waqtiyadaas ku baxa gaaraaya shan bilyan oo karoon sannadkii, ayuu yiri David Liljeqvist, oo hawlwadeen ka ah Ururka shaqaalaha caafimaadka.